Dilal qorsheysan oo ka dhacay magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Dilal qorsheysan oo ka dhacay magaalada Muqdisho
Waxaa ku soo kordhaya magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow dhow dilalka qorsheysan oo loo isticmaalo bastooladaha iyadoo la beegsanayo ciidamada dowlada iyo dadka rayidka ah ee lala xiriiriyo dowlada.
Dilalkii ugu dambeeyay ayaa ka dhacay degmada Yaqshiid iyo deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho iyadoo la diley mid kamid ah guddoomiye waaxeedyada magaalada Muqdisho iyo qof la sheegay inuu ka mid ahaa ergadii ka qeygashay doorashada xildhibaanada Aqalka Hoose.
Degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho ayaa lagu diley mid kamid ah guddoomiye waaxeedyada degmada Yaqshiid kaasoo magaciisa lagu sheegay Xasan Maxamuud Taakow (Macallin Shabeelow).
Kooxda dilka guddoomiyaha fulisay ayaa la sheegay in ay goobta ka baxsadeen iyadoo halkaasi ay gaareen ciidamada ammaanka.
Dhinaca kale, deegaanka Ceelasha Biyaha ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa rag bastoolado ku hubeysan waxa ay ku dileen mid kamid ah ergadii Galmudug ku soo dooratay Baarlamaanka Soomaaliya.
Qofka la diley ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdulaahi Kaba-weyne iyadoo lagu toogtay bartamaha Deegaanka Ceelasha Biyaha.
Ma jirto illaa iyo hadda cid loo qabtay falalka dilalka ah iyadoo sidoo kale dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay dilal qorsheysan ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho.
Dagaal culus oo ka dhacay Degmada Baardheere
Xildhibaan dhaawac culus uu ka soo gaaray qarax goor dhow ka dhacay Gaalkacyo